Iindaba -Izixhobo ze-30 zamazwe ngamazwe eShanghai zeZibhedlele kunye neNkonzo yokutya i-EXPO
I-30 ye-Shanghai International Equipment Equipment kunye neNkonzo yokutya i-EXPO
Inkampani: Inkampani yaseShanghai Copak yeNkampani LTD
Idilesi: Umboniso weSizwe kunye neZiko leNgqungquthela (eShanghai).
Hayi. 333 Songze Avenue, Xujing Town, Qingpu District, Shanghai
Idilesi yeNombolo: 2.2G30
Iimveliso: Iikomityi zePET zesiselo, iikomityi zePET zesiko, iibhotile zePET zesiselo, Iibhotile zePET zesiko, izitya zamaphepha, izitya zephepha okwakhiwa njalo njalo.
Ixesha: 29th-Mar ukuya ku-1st Ngomhla wama-2021
I-2021 Umboniso wehotele i-Shanghai uza kuza kwindawo eNtsha-uMboniso weSizwe kunye neZiko leNgqungquthela (eShanghai). IHOTELEX Shanghai izonyuselwa kumacandelo aphambili ali-12: Izixhobo zokutya kunye neZibonelelo, iTheyibhile, Izithako zokutya, iKofu kunye neTi, Ukutya, Isiselo, Ukubhaka Izixhobo kunye neMathiriyeli, i-Ice Cream Equipment kunye neMathiriyeli, iziselo ezinxilisayo, uyilo lokutya kunye nesincedisi, ukupakisha ukutya kunye nokutya, kunye neeFranchisees kunye notyalo mali.
Siza kuthatha iisampulu ezintsha zeekomityi zesiselo sePET kunye neebhotile zesiselo sePET kunye nezitya zephepha kulo mboniso. Ungakhetha nantoni na oyifunayo uze ucele nekoteyishini kwindlwana yethu.
Iikomityi ze-PET ziyahluka ukusuka kwi-1oz ukuya kwi-32oz, Ubunzima bunokuhlengahlengiswa ngokwemfuno zabathengi. Ezinye iisampulu zaboniswa ngeli xesha lilungileyo. Ungajonga umgangatho wethu, ukucaca, kunye neenkcukacha ze-nother. Iisampulu zasimahla ziyafumaneka. Ushicilelo lwe logo nalo luyaxhaswa, ungazixelela zonke iinkcukacha kubantu bethu abakwimeko elungileyo.
Iibhotile zePET zinokhetho oluninzi kwiimilo nakwimigangatho kunye neekepusi. Unokwenza iibhotile ze-PET zemilo yesikwere, iibhotile ze-PET zesilinda, iibhotile zePET ezingqukuva okanye nayiphi na enye imilo. Umthamo uyahluka ukusuka kwi-6oz ukuya kwi-32oz. Unokukhetha umbala ocacileyo ocacileyo okanye eminye imibala. Ukuprintwa kwe logo kuyamkeleka. Umatshini wethu wokushicilela ngokuzenzekelayo unokuprinta uphawu lwakho ukuya kwimibala emi-6.
Izitya zePhepha zine-liner ye-PE, i-PLA liner, i-Aluminium liner. Kukulungele konke ukutya okushushu nokubandayo. Ungakhetha wethu izitya ukupakisha isaladi, imifuno, isepha, irayisi, noddles njalo njalo. Kukho ii-caps ezifanelekileyo ze-PP, i-PET, izinto zephepha. Unokwenza isiko elifanelekileyo izitya ngokokusetyenziswa.
Eminye imifanekiso yemiboniso yethu: